संसारका ६ ठुला कम्पनीहरू जसले ग्यारेजबाट सुरुवात् गरे | Nepalibiz.com.np ( nepali online directory and news portal site )
संसारका ६ ठुला कम्पनीहरू जसले ग्यारेजबाट सुरुवात् गरे
भनिन्छ, हरेक ठुलो कुराको सुरुवात् सानो कुराबाट नै हुन्छ । यो एउटा ध्रुव सत्य हो । यसलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन । तपाईँ चाहे जति सुकै माथि उड्नुहोस् तर यसको सुरुवात् भूईबाट नै हुन्छ । यो सत्यलाई संसारका ठुला कम्पनीहरूले प्रमाणित गरेका छन् । यी कम्पनीहरू ग्यारेजबाट सुरु भएका थिए तर आज संसारका ठुला कम्पनीको रूपमा यिनको नाम प्रसिद्ध छ ।
१. अमेजन डट कम ः जेफ बेजोसले अमेजन डट कमको सुरुवात् सन् १९९४ मा गरेका थिए । त्यस बेला यो अनलाइन बुक स्टोर हुने गथ्र्यो र बेजोस आफ्नो सबै काम ग्यारेजमै बसेर गर्थे । उनले १९९५ मा आफ्नो पहिलो किताब बेचे । यसको मतलब उनले वर्ष भरीमा कुनै विशेष उपलब्धि हात पारेनन् । उनले चाहेको भए त्यो कम्पनी बन्द हुन सक्थ्यो किनकि वर्ष भरीमा कुनै आम्दानी बेगर काम गरी रहनु सजिलो छैन । तर उनले यसलाई जारी राखे र दुई वर्ष पछि यसको आइपिओ जारी भयो । आज अमेजन डट कम संसारको सबैभन्दा ठुलो अनलाइन रिटेलर कम्पनी हो । तर यसको सुरुवात् ग्यारेजबाट भएको थियो ।
२. एप्पल ः २१ वर्षे स्टीव जव्स र २६ वर्षे स्टीव वोज्नीकले सन् १९७६ मा एप्प्ल कम्पनीको सुरुवात् गरेका थिए । वोज्नीकले बनाएको एप्प्ल आई कम्प्युटरलाई त्यस बेला एउटा लोकल कम्प्युटर स्टोरमा ५०० डलरमा बेचिएको थियो । त्यसपछि उनीहरूको सानो समूहले एक महिना भित्र ५० वटा कम्प्युटर बनाएर बेचे । यो सबै काम एउटा सानो ग्यारेजमा सम्पन्न भएको थियो तर आज एप्पल कम्पनी संसारकै महत्वपूर्ण आइटी कम्पनी मध्ये एक हो ।
३. डिज्नी ः क्यालिफोर्नियामा डिज्नील्याण्ड देखि ४५ मिनेट टाढा एउटा सानो घर छ । जहाँ वाल्ट डिज्नीले आफ्नो कम्पनी सुरु गरेका थिए । सन् १९२३ तिर उक्त घर वाल्टको अंकलको थियो । वाल्ट र उनका भाइले त्यहाँ बसेर आफ्नो पहिलो प्रोजेक्ट एलिस इन द वन्डरल्याण्डको छायांकन सुरु गरेका थिए । आज डिज्नी संसारको सबैभन्दा ठुलो मेडिया इन्टरटेनमेन्ट कम्पनी मध्ये एक हो ।
४. गुगल ः लेरी पेज र सर्गी ब्रिन स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटीका विद्यार्थी थिए । उनीहरूले आफ्नो एउटा साथीको ग्यारेजमा सन् १९९८ मा यसको सुरुवात् गरे । केही समय पछि उनीहरूले महसुस गरे कि गुगलको कामका कारण उनीहरु कलेजको काम गर्न भ्याइ रहेका छैनन् । यस कारणले उनीहरूले गुगललाई एक्साइट नामको कम्पनीलाई एक मिलियन डलरमा बेच्ने प्रयास गरे तर उक्त कम्पनीले यो प्रस्ताव अस्वीकार ग¥यो । आजको समयमा गुगल बिना मानिसहरूको काम नै चल्दैन । संसारको नम्बर एक सर्च मेसिनको रूपमा गुगलले राज गरिरहेको छ ।
५. हार्ले डेभिडसन ः यो यस्तो नाम हो, जुन हरेक बाइक प्रेमी व्यक्तिलाई थाहा छ । यो हरेक व्यक्तिको ड्रिम बाइक हो । २१ वर्षे मेकानिकल इन्जिनियर विलियम एस हार्लेले एउटा यस्तो इन्जिन तयार गरे, जुन कुनै पनि साइकलमा फिट गर्न सकियोस् । आफ्नो साथी डेभिडसन सँग मिलेर उनले १९०३ मा पहिलो हार्ले डेभिडसन बाइक निकाले र उनले यो काम सानो ग्यारेजबाट नै सुरु गरेका थिए । सुरुवात्मा एउटा काठले बनेको ग्यारेजमा हार्ले एण्ड डेभिडसन मोटर कम्पनी भनेर लेखिएको थियो ।
६. एचपी कम्पनी ः एचपी कम्पनी त्यो कम्पनी हो, जसले कम्प्युटर निर्माणको संसारमा आफ्नो आधिपत्य जमाई सकेको छ । संसारको सबैभन्दा बढी विश्वसनीय कम्पनी मध्ये एक एचपी कम्पनीको सुरुवात् बिल हेवलेट र डेभ पेकार्डले सन् १९३९ मा गरेका थिए । ती दुवै स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटीका विद्यार्थी थिए । उनीहरूले पनि यस कामको सुरुवात् घरको ग्यारेजबाटै गरेका थिए ।